७ फिटको 'आधा जनावर आधा मानव' देखिएपछि मानिसहरु त्रसित !
तस्बिर : Mirror Uk/(UFOmania / Youtube)
दक्षिण अमेरिका । अक्सर मानिसहरुमा भूत, राक्षसहरु राति आउँछ भन्ने धारणा छ, यद्यपि विश्वास गर्ने नगर्ने आफूमा भर पर्ने कुरा हो । कल्पनाको सीमा पार गरेका फिल्महरुमा देखिने डर लाग्दो दृश्य तपाईंको छेवैमा देख्नुभयो भने के होला ? पक्कै पनि आश्चर्य र भय एकैसाथ सृजना होला ।
अर्जेन्टिनाको सान्टा फे टाउनमा खिचिएको एउटा फुटेजले अहिले अनलाइनमा चर्चा बटुलिरहेको छ । आधा मान्छे आधा पशुजस्तो देखिने जनावरले एउटा जर्मन शेफर्ड र अर्को पिटबुल कुकुर मारेपछि त्यहाँका बासिन्दा डराएको बताइएको छ । त्यहाँकै स्थानीय बासिन्दाले खिचेको एउटा फोटोमा कुकुरजस्तै देखिने, चारवटा अग्ला अग्ला र निकै दुब्लो खुट्टा भएको जनावरले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको हो ।
देख्दा यो ऊँटसँग मिल्दोजुल्दो छ । लामो घाँटी तर टाउको घोडा या खरायोको जस्तै भएको यो जनावर ७ फिट अग्लो रहेको मानिएको छ । तर अहिलेसम्म यो फोटोलाई मात्रै हेरेर यसको चर्चा गरिएको छ ।
यूएफओ मानिया भन्ने आईडीबाट युट्युबमा पोष्ट भएको यो फुटेज चार लाख १६ हजारले हेरिसकेका छन् । एकजनाले त्यसमै सन् २००५ मा यस्तै वस्तु पुल पार गर्दै गरेको अवस्थामा देखेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । त्यो देख्दा निकै डर लागेको किनभने त्यसले आफूलाई फर्केर हेरेको र कंगारुजस्तै हिँडेको बताएका छन् ।
त्यस्तै अर्का युजरले फिलिपिन्समा यसलाई आस्वांग भन्ने गरिएको जुन भनेको मानिस कुकुरमा परिवर्तन हुने हुन्छ । यसलाई डेमन पनि भन्ने गरिएको, जो बिरालो या ठूलो चरा पनि हुनेसक्ने भनी लेखेका छन् ।
कम निद्राले हृदयघातको समस्या बढाउने ! मानिसलाई कति निद्रा आवश्यक ?
निद्रा हाम्रो मुटुको स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदाकारी छ । अचेल पर्याप्त मात्रामा निदाउनु अपवाद नै बनिसकेको छ । हरेक व्यक्ति दिनभर त व्यस्त हुन्छ नै, राति पनि टिभी, कम्प्युटर र
टाउकोलाई 'जिउँदो खप्पर' बनाउन भूत चढेपछि यी मानिसले काटे नाक र कान
काठमाडौं । एक मानिसले आफ्नो टाउकोलाई जिउँदो खप्पर बनाउन दुवै कान र नाक पनि आधा काटेका छन् । ट्याटु खोप्ने काम गर्दै आएका कालाका स्कुल नामका व्यक्तिले शारीरिक बनावट परिवर्तन